Go’aano ka soo baxay Golaha Hawlfulinta DDS oo ku saabsan goobaha aanu xuduuda la wadaagno Deegaanka Canfarta – Xeernews24
Go’aano ka soo baxay Golaha Hawlfulinta DDS oo ku saabsan goobaha aanu xuduuda la wadaagno Deegaanka Canfarta
3. Mai 2019 /in Qormooyin/Articles /von admin
Sida la wada ogsoonyahay, hoggaamin dano gaar ah lahaa oo ku jiray Dawlada Federaalka iyo tan Deegaanka Soomaalida oo iskaashanaya ayaa waxay go’aamiyeen in saddexda Magaalo ee Soomaaliyeed ee kala ah Garba-ciise, Cundhufo iyo Cadeytu si aan waafaqsaneyn dastuurka dalka loogu daro deegaanka Canfarta.
Wadatashi ballaadhan kadib waxaa la isla gartay illaa inta Dawlad cadaalad ku shaqeysa oo ay ka go’antahay dhaqangalinta dastuurka Federaalka ay ka dhalaneyso dalkeena in lagu dadaalo sidii Shacabkaas baahan Deegaanka Canfarta wax looga soo goyn lahaa Nabadgalyana lagu heli lahaa. Waxaana Dawlada Federaalka loo gudbiyey Qoraal ka turjumaya sidii Xuquuda Shacabkaas ku dhaqan 3da magaalo ee dhinaca Bulsho dhaqaale iyo dhinaca siyaasadeedba loo sugi lahaa. Qodobada lagu daray heshiiskii ay kala saxeexdeen Deegaanka Soomalida iyo Deegaanka Canfartu taariikhdu marka ay ahayd 2/04/2011 T.I waxaa ka mid ahaa
1. In ay shacabka 3da magaalo ku dhaqan iskood isku maamulaan oo ay yeeshaan hay’adaha sharci dejinta, sharci fulinta iyo garsoorka,
Haseahaatee, in kastooHeshiiskii kadib in mudo ah 3da Magaalo iyo nawaaxigooda nabadgalyo lagu helay oo dilkii iyo dhaawicii joogtada ahaa yaraaday balse Deegaanka Canfartu uu ku guul daraystay inuu sidii loogu talagalay u fuliyo Heshiiska. Ilaalin la’aanta Xuquuqda shacabka kasakow, Booliska gaarka ah (Liyu Booliska) Dawladda Deegaanka Canfartu waxay shacabka rayadka marar badan kula kaceen xasuuq iyo barakicin ballaadhan. Waxaa intaas dheer in Ciidamada Liyu booliska Deegaanka Canfartu u soo gudbeen gudaha Deegaanka Soomalida islamarkaana dil, dhaawac iyo barakicin u geysteen Shacabka Soomaaliyeed ee goobaha Xuduuda aanu la wadaagno Deegaanka canfarta degan. Waxaana xusid mudan Xasuuqii Liyu Booliska Deegaanka Canafarta, Jabhadaha mucaaradka ah iyo kooxo Isbadalka Dalkeena ka hana qaaday awgeed ku waayey danahoodii gaarahaaned oo iskaashanaya xasuuqii ay u geysteen shacabka degan Qabalaha Madane ee Degmada Ma’ayso iyo Shaqaalihii Hay’adda Save the Children ee adeeg samafal ah ku hawlanaa ee sida sharci darada ah looga qabtay Qabalaha Danlahelay oo ka tirsan Degmada Afdem ee DDS oo illaa hadda Jeelasha Deegaanka Canfarta ku xidhan.
Dhanka kale, laga bilaabo intii Isbadalku ka hanaqaaday Deegaankeena, Xukuumadu waxay dadaal ugu jirtay sidii hab waafaqsan datsuurka dalka oo ku saleysan Dimuqraadiayad, Nabadgalyo iyo adkeynta walaatinimada labada shacab xal waara loogu heli lahaa cabashooyinka shacabka soomaaliyeed ee degan 3da Magaalo iyo nawaaxigooda. Haseahaatee, Dawladda deegaanka Canfarta waa laga waayey jawaabtii ku habboonaa. Sidoo kale, Hay’adaha Federaalkuna waxay ka gaabiyeen sugida amaanka shacabka ku dhaqan goobaha xuduudaha Deegaanka Soomaalida iyo Deegaanka Canfarta.
Haddaba, waxaa lagama maarmaan noqotay inuu Golaha Hawlfulinta DDS qiimeeyo xaalada Bulsho-dhaqaale iyo tan Nabadgalyo ee shacabka Degmooyinka Afdem, Gablalu iyo Ma’ayso iyo sidoo kale habkii loo fuliyey qodobadii heshiiska ku xusnaa. Falanqeyn qoto dheer kadibna wuxuu Goluhu cod buuxa ku ansixiyey Qodobada hoos ku xusan.
1. Dawladda Deegaanka Soomaalida waxaa ka go’an in si buuxda loo dhaqangaliyo dastuurka Dalka. Sidoo kale, waxay ka soo horjeedaa wax kasta oo lid ku ah Dastuurka. Sidaasdarteed, Golaha Hawlfulintu waxay iskuraaceen inuu Heshiiskii lagu wareejiye 3da Magaalo ee kala ah Garba-ciise, Cundhufo iyo Cadeytu ahaa mid aan waafqsaneyn Dastuurka Dalka iyo rabitaanka Shacabka laguna fuliyey si juujuub ah oo ay ka danbeeyeen koontarabaadhistayaal adeegsanayay awood Dawladeed.
2. Dawladda Deegaanka Canfartu waxay ku guul dareysatay sugida xuquuqda Shacabka Soomaaliyeed ee sida sharci darada ah loogu wareejiye gaar ahaan dhinaca fulinta Qodobadii heshiiska ku cadaa iyo sugida amniga shacabka;
3. Laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 25/08/2011 T.I Xukuumadda Dawlada Deegaanka Soomaalidu waxay ka noqotay heshiiskii ay kala saxeedeen Maamuladii hore ee labada dawlad Deegaan ee ku saabsanaa 3da Magaalo oo markiisii horeba aan Dastuurka ku saleysneyn;
4. Iyadoo lala kaashanayo Hay’adaha amniga ee Federaalka DDS waxay mas’uuliyad ka saarantahay sugida amniga Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan 3da Magaalo ee kala ah Garba-ciise, Cundhufo iyo Cadeytu. Sidoo kale, Golaha Hawlfulinta ee DDS wuxuu go’aamiyey inay Hay’adaha Deegaanku gaadhsiiyaan adeegyada aasaasiga shacabka ku nool aagaas.
5. iyadoo lala kaashanayo Hay’adaha samafalka iyo Dawldda Federaalkaba in gargaar deg deg ah oo dhinaca baniaadanimada la gaadhsiiyo shacabka ku dhaqan 3da Magaalo iyo nawaaxigooda;
6. Dawladda Deegaanka Canfartu waa inay si deg deg ah xabsiga uga sii deysoo Shaqaalaha Hay’adda save the Children, Dhalinyarada, Haweenka iyo Odayaasha Soomaaliyeed ee sida sharci darada ugu xidhan Jeelasha Deegaanka Canfarta, kuna soo wareejiso DDS;
7. Iyadoo lala kaashanayo Hay’adaha Caddaalada ee Federaalka waa in sharciga la horgeeyo Shaqsiyaadkii tacadiyada galay ee ka danbeeyey Dilalkii, dhaawacyadii, dhaciii iyo barakicintii shacabka loo geystay;
8. Inay Hay’adaha amniga ee DDS adkeeyaan amaanka goobaha xuduudaha iyagoo aan ka gudbeyn Xuduuda Deegaanka, islamarkaana ay shacabka ka difaacaan weerar kasta oo lagu soo qaado.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/52.jpg 194 259 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-05-03 18:55:262019-05-03 18:55:26Go’aano ka soo baxay Golaha Hawlfulinta DDS oo ku saabsan goobaha aanu xuduuda la wadaagno Deegaanka Canfarta
Daawo dawladda Deganka Soomaali-State oo maanta ku talaabsaday arin taarrikhda... WAX KA OGOW SIDII LAGU ABOOBAY DHULKA SOOMALIDA EE CADAYTI, CUNDHUFO,GARBA CIISE,...